Wasiirka difaaca ee Suudaan ayaa u dhintey wadne xanuun – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wasiirka difaaca ee Suudaan ayaa u dhintey wadne xanuun
Wasiirka difaaca ee Suudaan ayaa u dhintey wadne xanuun
Wasiirka difaaca ee Suudaan, General Gamal al-Din Cumar, ayaa u dhintay wadno xanuun xilli uu booqasho rasmi ah ku joogay dalka South Sudan ee dariska la ah, sida ay sheegeen saraakiisha Suudaan.
Cumar wuxuu ku sugnaa caasimada Koonfurta Suudaan ee Juba, isagoo ka qeyb qaadanayay wadahadalada nabadeed ee u dhaxeeyay dowladiisa ku meel gaarka ah iyo kooxaha mucaaradka.
Wuxuu xubin ka ahaa golaha awoodda ee Suudaan, kaasoo xukunka la wareegay sanadkii la soo dhaafay heshiis awood qeybsi ah oo 39 bilood ah oo u dhexeeyay militariga waddanka iyo dhaqdhaqaaqa dimoqraadiyadda ee horseeday kacdoonkii ka dhanka ahaa madaxweynaha muddada dheer Cumar Al-Bashiir.
Bayaan ay soo saareen Arbacadii ayay ciidamada Suudaan ku sheegeen in dhimashada Cumar ay ka dhalatay wadne oo istaagey
Dhiniciisa, Jeneral Abdel Fattah al-Burhan, oo madax u ah golaha madaxbanaanida, ayaa sheegay inuu ka murugooday geerida Cumar “oo dhintay isagoo u halgamaya xasiloonida Suudaan” – tixraac ku saabsan wadahadaladii uu la yeeshay fallaagada si loo soo afjaro dagaalada sokeeye ee muddada dheer socday ee Suudaan. .
Dawladda ku meel gaarka ah ee Suudaan waxay wadahadalo nabadeed kula jirtay kooxaha fallaagada ah ilaa Oktoobar.
Waxaa lagu qabtay magaalada Juba, wadahadallada ayaa looga golleeyahay xasilinta waddanka iyo in laga caawiyo jidkeeda jilicsan ee dimuqraadiyadda ka badbaado ka dib afgembigii militariga ee al-Bashiir bishii Abriil ee sannadkii hore oo ay wajahayaan mudaaharaadyo baaxad weyn oo lagaga soo horjeedey xukunkiisa.
Gaarista heshiis nabadeed oo ay la gasho mucaaradka ayaa muhiim u ah dowladda ku meel gaarka ah ee Suudaan iyada oo raadineysa dib u dayactir lagu sameynayo dhaqaalaha dalka ee dhibaataysan, soo jiidashada gargaarka shisheeye ee aadka loogu baahan yahay iyo gaarsiinta dimoqraadiyada ay balan qaaday.
Itoobiya oo Markii ugu Horreeyay ka Hadashay Kulankii Dhex-Maray Madaxweyne Muuse...